Mpitarika Facebook ao amin'ny Facebook Mark Zuckerberg Manangana Butler "Software" Jarvis
Mpitantana ny Facebook Mark Zuckerberg manangana ny Butler Software "Jarvis" ho an'ny tranony
Ny mpikirakira Mark Mark Zuckerberg izay mpikatroka mafàna fo "saty" - izay antsoina hoe Jarvis - dia eo amin'ny fitantanana, ary na dia milalao miaraka amin'ny fianakaviany aza, ilay lehiben'ny Facebook dia nilaza ny Alatsinainy.
I Zuckerberg dia nanohitra ny firotsahana an-tsehatra tamin'ity taona ity, ary nanodidina ny ora 100 mba hametrahana rindrambaiko namboarin'i Jarvis, mpilalao sarimihetsika "Iron Man", ho toy ny fanampiana virtoaly hiatrehana ny vondrom-pianakaviany.
"Amin'ny fomba sasany, io fitsapana io dia tsotra kokoa noho ny nantenaiko," hoy i Zuckerberg nilaza tao amin'ny pejiny tao amin'ny pejiny tao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena.
"Eny tokoa, ny fitsilam-pandehako (narahiko ihany koa namoaka 365 kilometatra tao amin'ny 2016) dia naka fotoana betsaka kokoa."
Tsy robot ara-batana i Jarvis, fa ny fampiharana an'i Zuckerberg dia afaka miditra amin'ny findainy na PC mba hifehy ny jiro, ny mariage, ny mozika, ny fiarovana, ny fitaovana ary izany no fiandohana.
Ny vokatra dia maka ao amin'ny lahatsorany sy ny ohatra nasehony, ary koa teny vaovao na hevitra, ary afaka mampiditra ny zanany kely kely iray taona, Max, araka ny Zuckerberg.
Mahalala ny fisehoan-javatra
Ny dikan-teny miomana amin'ny fitenenana sy ny fombam-pitenenana dia nampidirina miaraka amin'i Jarvis, manome hery azy hahatakatra ireo fitarainana niresadresaka na voatonona ary nahatsikaritra izay iza no namoaka azy ireo, hoy i Zuckerberg.
Ny vokatra dia afaka manapa-kevitra raha misy mpitsidika iray ao amin'ny fidirana dia mahazatra ary mamela azy ireo any an-trano, ary manoro ny fianakaviana izay nisy olona nanohina ny fotony, araka ny asehon'ny lahatsoratra.
"Ny lanjany iray izay tena nahamenatra kokoa noho ny nantenaiko dia ny nifaneraserako sy niresaka tamin'ny ankamaroan'ny rafitra manokana ao an-tranoko," hoy Zuckerberg.
"Ny ankamaroan'ny milina dia tsy mifandray amin'ny tranonkala."
Ny mpiara-miasa, ohatra, Jarvis dia tsy mila fitaovana fotsiny ao an-tokantrano raha te hifandray amin'ny Internet, mila mila mihazakazaka amin'ny modely mahazatra izy ireo, araka ny nasehon'ny mpiara-miasa amin'i Facebook sy ny CEO, izay niverina tany amin'ny vokatra novokariny barotra.
Ny fanafihany tao amin'ny AI dia namporisika azy koa ny dikan'ny fandaharam-pampianarana an-tsitrapo mba hahatakarana ny fikandrana, ohatra hoe iza no miresaka sy ny toerana misy azy ireo.
"Rehefa manome torolalana aho mba hamadika ny AC (fananganana sy fandroahana) ao amin'ny" biraoko ", izay midika zavatra iray tanteraka tsy mitovy amin'ny hoe rehefa nampahafantarin'i Priscilla azy tsara izany," hoy i Zuckerberg, ary nilaza ny halavany.
"Nisy namorona olana vitsivitsy!"
Mety hipoitra ny olana raha oharina amin'ny mozika halefa tsy misy ny AI izay lazaina hoe efitrano, indrindra raha toa ny fari-dranomasina iray sisa.
Ny fametrahana ny AI bebe kokoa, ny tsara kokoa azony atao amin'ny fangatahana malalaka, dia nanamarika izy.
"Ankehitriny, ny ankamaroako indrindra dia mangataka fotsiny fa i Jarvis dia hilalao ahy mozika" ary amin'ny alàlan'ny fakana an-keriny amin'ny alàlan'ny fanoratako fihainoana taloha, ho an'ny ankamaroany dia manilika zavatra mila henoiko, "hoy izy.
Nilaza i Zuckerberg fa mihevitra ny hametraka ny Jarvis amin'ny fampiasana "Bot" izy izay niasa tamin'ny tombontsoa tamin'ny Facebook Messenger raha nanohitra ny handefasana azy io, amin'ny ankapobeny, tsy hanaisotra ny olona manodidina azy.
Ny fitsaboana ny AI dia nahatonga ny fiantraikany ara-tsaina amin'ny fijeriny azy ho toy ny tena olona marina, hoy izy nanamarika.
"Raha mbola teo am-pamakiana ny feo niaraka tamin'i Jarvis aho, dia mbola nila niasa bebe kokoa aho", hoy i Zuckerberg.
"Ny ampahany amin'izany dia izao dia afaka mifandray amin'i Max izy ary mila ireo fifandraisana mba handraisany azy aho, nefa ny ampahany aminy dia ny fahatsapana fa misy izany ankehitriny."
Notantarainy ny fiantsorohana ny AI ho fanodikodinana izay anontaniany ny tokony hijerena azy, ary i Jarvis dia mamela olona iray ao amin'ny fianakaviana, anisan'izany ny puppy, mba hisarihana azy.
Zuckerberg dia te-hanohy hampivelatra an'i Jarvis, ary nilaza fa resy lahatra kokoa noho ny fotoana hafa izy tao anatin'ny fahatsiarovany vao haingana fa hanatsara ny fivezivezen'ny AI amin'ny dimy taona manaraka ny 10 taona.
"Tiako ny manana an'i Jarvis hifehezany ny zeziko Big Green ary hanampy ahy handrahoana, kanefa izany dia hikorontan-tsaina kokoa raha oharina amin'ny fitaovam-piadiana ny T-shirt", hoy izy, mijery marika marika vita amin'ny garazy vita amin'ny tanimanga.
"Amin'ny fe-potoana farafahakeliny, azoko atao ny miala amin'ny fahafahana hanadihady ny fampisehoana an'i Jarvis hoe ahoana no hianatra fahaiza-manaony vaovao fa tsy mampianatra azy ny fomba fitantanana manokana."
Ny AI dia mahazo trano any an-tokantrano, manomboka amin'ny gadget, ohatra ny Amazon Echo sy ny Google Home mpandahateny izay mifandray amin'ny mpanampy tsirairay mba hamaly fanontaniana sy hifehy ny gadget.
Apple Watch Series 2 dia mampiseho ireo fanentanana Holiday